Kiobà: Fiaraha-mientana an-tserasera taoriana fianjerana voromby · Global Voices teny Malagasy
Kiobà: Fiaraha-mientana an-tserasera taoriana fianjerana voromby
Voadika ny 09 Novambra 2010 8:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Nederlands, Italiano, Deutsch, বাংলা, English
Voromby Kiobàna nianjera nitondra mpandeha 68. Nindramina avy tamin i Escambray.
Nanamafy ny vohikalan-gazety Escambray [es] ny takariva mody masoandron'ny alakamisy 4 novambra fa nisy voromby [fiaramanidina] nianjera teo akaikin'ny tanànan'i Guasimal, 15 kilometatra miala avy eo an-tanànan'i Sancti Spiritus ao afovoan'i Kiobà. 68 ny isan'ny olona maty. Minitra vitsivitsy toriana dia nifampita vaovao momba ity lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona ity tamin'ny alalan'ny twitter.com ny Kiobàna mpampiasa azy.
Ny mpanao gazety @humbct66 no nisioka ny filazana voalohany momba ity raharaha ity, tahaka ny fahatongavan'ny ambulances sy ny mpamonjy voina mikaroka sao mbola misy ny velona. Rehefa hitandry zareo fa tsy misy velona intsony tao dia niely nanareana ny aterineto ny hafatra fampaherezana ho an'i havan'ireny niharam-boina.
Mitombo ny fiaraha-mientana. Mifangaro amin'ny aternieto avokoa ny hafatra avy amin'ny olo-malaza sy ny olo-tsotra tamin'ny fampiasana ny tenifototra #accidente any #SanctiSpíritus
Avy amin'ny fampiasa ny tenifototra #Cuba kosa no nahatongavan'ny hafatra fampaherezana avy amin'ireo Kiobàna monina any ampitan-dranomasina.Manoratra i @marianeli54:
Mankany amin'ny mpiray tanindrazana malala mitomany noho ny lozam-pifamoivoizana an-habakabaka zotra ATR-72 ny eritreritro
Nivadika ho sehatra ahitana loharanom-baovao amin'ny antsipiriany ny zavanitranga ny sehatra ho amin'ny fanehoan-kevitra isan-karazany. Avy ao amin'ny Cubadebate [es], nilaza i Osmel fa tany amin'ny toerana nitrangan'ny loza izy ary lazainy fa “mampihorin-koditra” ny hitany. Mandritra izany fotoana izany dia miangavy ny hanaovana “fisaonam-pirenena noho ny loza” i Adrián [es] ao amin'ny Juventud Rebelde [es].
Hatramin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra nadika dia tsy mbola fantatra ny antony nahatonga ny loza saingy efa nanangana vaomieran'ny manampahaizana hanadihady momba ity lozam-pifamoivoizana nahafatesana Kiobàna 40 sy vahiny 28 avy amin'ny firenena folo hafa avy any Arzantina, Meksika, Holandy, Alemaina, Aostrisa, Espaina, Frantsa, Italia, Japana ary Venezoelà ity ny sampan-draharaha kiobàna misahana ny fifamoivoizana an-habakabaka.
El blog de Yohandry [es] sy Destino Cuba [es] no mamoaka ny vaovao farany momba ity voina mampalahelo ity.